Himilo FM– Maalinta Buugga iyo xuquuqda Lahaanshaha ama Copy-right-ka waa dhacdo sanadle ah oo ay soo agaasinto hey’adda QM u qaabilsan dhaqanka, culuumta iyo wax-barashada ee UNESCO. Sanad kasta 23 bisha April ayaana la xusaa.
Dhacdada gaarka ah ee munaasabada maalintan ayaa daaha looga rogaa ku kala duwanaanta siyaalaha hal-aqrinta, lahaanshaha xuquuqda iyo daabacadda dunida ka jirta.
Waxay sidoo kal sheegtay inay dunida ka jirto macluul xagga buugaagta ah maadaama dadka damanayaasha ah ama arag la’ iyo kuwa kale ee lixaadkoodu dhimman yahay aysan heli karin buugaag badan oo iyaga gaar u ah.
Hayeeshe dal kasta ma ahan mid u dabaal-dega xuska maalintan sida Australia iyada oo waliba xubin ka ah hey’adda QM. Marka loo eego Book Town Australia, muwaadiniintoodu waxay si sanadle ah u xusaan toddobaadka Buugga gudaha bisha August.
Tani iyo sanadkii 1945-kii ayuu guddiga buugaagta dhallaanka soo agaasimayay xuskan oo waliba ka fog, taariikh ahaan, markii Maalinta Caalamiga ah ee Buugga iyo Xuquuqda Lahaanshaha la asteeyey oo ku beegan 23 April sanadkii 1995.
Previous: Chelsea oo beddelka Eden Hazard ka arkootay Barcelona
Next: Shiinaha oo hannaan cusub kula xisaabtamaya shaqaalaha nadaafadda